नियम र प्रतियोगिताको को स्थितिहरु- जीत स्मार्टफोन |
यो पदोन्नति चलाउन हुनेछ 00:01 1सेन्ट डिसेम्बर 2016 सम्म 23:59 7ध डिसेम्बर 2016 (GMT).
को भाग गर्न “प्रतियोगिताको” खेलाडीहरू £ 10 को एक न्यूनतम जम्मा र wager पर्छ प्रचार अवधिमा.
यो “विजेता” यस प्रतियोगिताको शीर्ष हुनेछ3सबै स्लट खेल मार्फत प्रचार अवधिमा उच्चतम कुल wagering रकम छ भनेर खेलाडीहरू.
**नेटवर्क मार्फत,3शीर्ष क्वालिफाइङ खेलाडीहरू स्मार्टफोन प्राप्त हुनेछ (माथि £ गर्न 800 यो वितरण शुल्क समावेश)
कृपया पदोन्नति को समय मा यसो गरिएको छ कि सामान ध्यान दिनुहोस्, उपलब्ध र यसैले हुन सक्छ, व्यवस्थापन £ 800 को मूल्य कुल भन्यो निकटतम मूल्यहरु मा बराबर सामान प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार छ.
इमेल वा टेलिफोन सूचित गरिएको छ कि खेलाडीहरू, हुनेछ7तिनीहरूले स्मार्टफोन वा नगद बराबर स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यासिनो प्रतिक्रिया दिन.
गर्नुपर्छ3विजेता को एक नगद बराबर चयन 70% उपहार को मूल्य को (£ 560 नगद) खेलाडी भित्र खातामा यो जम्मा हुनेछ7प्लेयर सूचित देखि दिन काम. यो एक wagering आवश्यकता लाग्न छैन.
यो प्रतियोगिताको धेरै क्यासिनो मा Nektan नेटवर्क मार्फत प्रत्यक्ष.
निम्नानुसार पुरस्कार देखि सम्मानित गरिनेछ:
1सेन्ट – 3Rd ठाउँ स्मार्टफोन **
4ध – 13एक £ 50 बोनस प्राप्त हुनेछ औं स्थानमा
खेलाडी मात्र एक बोनस कुनै एक समयमा सक्रिय हुन सक्छ भनेर सम्झाइन्छ. कृपया जानुहोस् “मेरो खाता इतिहास” आफ्नो सम्पूर्ण बाँकी बोनस लाम समीक्षा गर्न खण्ड.
नगद र बोनस पुरस्कार लाग्न सक्छ7दिन काम आफ्नो खातामा जम्मा गर्न. यो स्मार्टफोन, उपलब्धता निर्भर 28days लाग्न उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ.
विजेता भएको क्यासिनो प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिनेछ.
नियम र Giveaway को स्थितिहरु